Akwụkwọ 8 maka oge oyi na udu mmiri, oge dị mma iji gụọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ 8 maka oge oyi na udu mmiri, oge kacha mma ịgụ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Akwụkwọ ndị ntorobịa, Novela, Black akwụkwọ
Oge oyi na-abịa. Ndi anyi huru oyi, snow na ice di nma. Obi ga-adị m ụtọ karịchaa ma ọ bụrụ na udu mmiri were afọ ahụ niile, mana ebe ọ bụ na ọ bụghị ya, aga m edozi ịnụ ụtọ ya ka ọ ka mma. Na mgbakwunye, ọ na-etinye otu gburugburu kachasị mma iji gụọ. Ihe ndina ahụ, blanket ahụ, kọfị ahụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ chocolate, na ezigbo akwụkwọ. Kedu ihe ị ga-achọ?
Ọfọn ebe ahụ na-aga ndị ahụ 8 dịgasị iche iche amụma maka ọtụtụ ndị na-ege ntị. Site na akwukwo akwukwo ndi edetu site na akwukwo ihe omuma site na akwukwo ihe omuma, ihe omuma ma obu ihe eji eme ihe. Nke bụ eziokwu bụ na ha nwere oge oyi na aha ha. Ka ahụ.
1 Akwụkwọ oyi - Rotraut Susanne Berner
2 Di na Nwunye Oge Ochie - Christelle Dabos
3 Na-agafe oge oyi - Isabel Allende
4 Oge oyi na ihu gị - Carla Montero
5 Oge oyi-Mermaids - Barbara J. Zitwer
6 Akụkọ oyi - Mark Helprin
7 Ofmụaka nke Oge Ugbo - Gilbert Bordes
8 Akụkọ banyere oyi - William Shakespeare
Akwụkwọ oyi - Rotraut Susanne Berner
De 2004, aha a nke 20 peeji bu iji tọrọ na-agụ akwụkwọ ruo 5 afọ. A mụrụ onye dere ya Stuttgart na dịka onye nhazi ihe osise ọ natara na 1984 Nrite German maka Childrenmụaka na Ihe Nleta Ndị Ntorobịa.
Kwadoro na kpokọtara n'ezie,, N’akwụkwọ a, anyị gafere obodo na ihe ndị gbara ya gburugburu. N'otu oge ahụ, anyị na-eso obere egwuregwu nke na-eme mmadụ na anụmanụ n’ụbọchị oyi. Dị ka Andrea, onye na-atụ uche ụgbọ ala ọzọ, ma ọ bụ okooko Lena na-agagharị. Ọ bụ ezie na a ga-enye ihe omimi site na obere akpa ego na-acha uhie uhie o doro anya na enweghị onye nwe ya.
Nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ n'oge oyi - Christelle Dabos
Dabos bụ onye edemede France na nke a bụ ya mbụ akwụkwọ nke a kediegwu saga jupụta n'echiche. Ophelia, onye protagonist nke yi ịchafụ eyi na nwere iko myopic, tO nwere ikike pụrụ iche: ọ nwere ike ịgụ ihe gara aga nke ihe ma gafee enyo.
Bi nwayọ n'ime Igbe Anima wee ya na Thorn na-ekwekọ nkwa ọlụlụ, nke ndi bu nna nke Dragons. Nwatakịrị nwanyị ga-ahapụ ezinụlọ ya wee soro ya Citacielo, isi obodo na-ese n'elu mmiri nke Osimiri. Mana Ophélie amaghị ihe kpatara eji họpụta ya maọbụ ihe kpatara ọ ga-eji zobe ezigbo njirimara ya.
Karịa oge oyi - Isabel Allende
Onye edemede a ma ama na-ezukọta na akwụkwọ akụkọ a Nwanyị Chile, nwa nwanyị Guatemalan na-akwadoghị na onye Amerịka tozuru etozu, bụ onye lanarịrị ajọ ifufe snow ịdakwasị New York na oge oyi nke oyi. Ha ga-emesị mụta na karịa oge oyi ahụ, ohere dị maka ịhụnanya a na-atụghị anya ya. Ọ bụ otu n'ime akụkọ banyere mmadụ de Allende ebe eziokwu nke njem na njirimara nke America taa site na ndị odide ahụ chọtara olileanya na ịhụnanya na ohere nke abụọ.
Oge oyi na ihu gị - Carla Montero
Ihe na 2016, bu akwukwo ohuru nke Madrid dere nke Mbadamba Emerald na intermix njem, ịhụnanya na agha na ọkara mbụ nke narị afọ nke XNUMX.
Stepmụnna nwoke Lena na Guillén Ha na-ebi nwayo n'ugwu n'ime obodo. Ha abụọ dị ezigbo nso mana ihe a na-atụghị anya ya na ihe omume na-enweghị atụ na-amanye ha ikewa. N'ime afọ ndị a na anya nke ihe ahụ na-eme ka ọ bụrụ ịhụnanya nke ndị ntorobịa na-eri nri site n'oge ruo n'oge na ọtụtụ narị leta.
Agha obodo juru Lena na Oviedo na Guillén na France anya. N'ịbụ onye ọnọdụ ya were iwe, ọ ga-eme njem dị ize ndụ site na mba nke ọgba aghara mebiri iji zute ya. Ma agha ahụ nwere akara aka ọzọ akwadoro ha n'ihi na Lena bụ onye ọrụ afọ ofufo nọọsụ nke ndị nnupụisi ahụ ma na-eguzogide n'obodo ndị agha Republic gbara gburugburu ebe Guillén bịarutere, onye so na ndị agha ahụ nọchibidoro obodo ahụ. Na a ga-emeghachi ọnọdụ ya n'Agha Worldwa nke Abụọ.
The mermaids nke oyi - Barbara J. Zitwer
Zitwer bụ onye na-ede edemede, onye na-eme ihe nkiri na onye na-ede iheka. Nke a bụ akwụkwọ mbụ ya ma na-agagharị Joey rubin, onye na-eto eto na-achọ mma na onye nhazi na New York. Ihe riri ya na-arụ ọrụ emewo ka ọ ghara ịhapụ ndị enyi ochie ya ma ọ na-eche na ọ dị nso na nkịta ya Tink. Ma Mgbe Joey gara ime obodo bekee iji lelee mmezigharị ụlọ ochie ahụ ebe JM Barrie n'onwe ya dere Peter Pan, ndụ ya ga-atụgharị..
N’obere obodo bekee o zutere umuaka JM Barrie Women's Swimming Club, otu ndi octogenarians ndị nwere oke mmụọ: na-asa ahụ ụbọchị ọ bụla n'afọ n'ime mmiri ọdọ mmiri dị obodo ahụ nso. Ha bụ mermaids nke anụ ahụ na ọbara, juputara na akuko na mmadu, nke a ga - enyere Joey aka ichoputa ezi ihe ndu.
Oge oyi - Mark Helprin
A mụrụ Helprin na New York na 1947. Ọ bụ odeakụkọ ma bụrụkwa onye edemede nke edemede na ọrụ akụkọ ifo maka ndị okenye na ụmụaka. Nnukwu ihe ịga nke ọma batara 1983 ya na akwukwo a nke buru uzo nke omenala ndi North America. Ọ bụ ịhụnanya ifo na kpokọtara ọcha, setịpụrụ na mmalite nke narị afọ nke XNUMX na Niu Yọk
Peter ọdọ ọ bụ onye nnupụisi so n'òtù ndị omempụ nke otu ụbọchị na-abanye n'ụlọ obibi na-enwe olileanya ịchọta ya efu ma nweta ezigbo ngwongwo. Ma chọpụta na Beverly penn, ada nke ndị nwe ụlọ, nwa agbọghọ na-enyo enyo na-enigharị enyo, ma maa ya ikpe ọnwụ. Ha abụọ hụrụ n'anya na Pita gbalịrị ịkwụsị oge ka onye ọ hụrụ n'anya ghara ịhapụ ya. Ya na ịnyịnya ọcha na-eso ya onye ga-eche gi nche.
Onye edemede, onye ederede na onye nduzi Akiva onye na -edo ọla edo rụrụ mmegharị ihe nkiri na 2014 na agwakọta agwakọta.
Oge oyi - Gilbert Bordes
Ihe na 2010, akwụkwọ a nke onye edemede French a setịpụrụ na oyi 1943. Ọ na-agwa anyị akụkọ banyere ụfọdụ nduzi a nwụchiri anwa kpọpụ na Spain ụmụaka isii nke ndị otu Nguzogide. Ha zoro ndị na-akwado ha, mana ha jụrụ inyefe ha ma ndị SS gburu ha. Ma, ụmụaka ahụ apụtabeghị. Ndị omekome ahụ kpebiri ịhapụ ha ma mebie naanị ụzọ ha ga-esi laghachi. Childrenmụaka isii (ụmụ nke ndị komunizim, bourgeois, ndị Juu na Ndị Kraịst) ga-ahazi, chọta nri na ọkụ, ma merie esemokwu iji lanarị.
Oge oyi - William Shakespeare
Olee otú ghara ịgụ a Ochie nke ochie ke ini etuep emi? Ọfụma anyị ejirila nke a mee ihe ọchị na omume ise, na prose na amaokwu, nke ede bard a kacha mara amara nke edere na ya 1611. Na-aụ site na ibé nke akwụkwọ ọgụgụ Pandosto ma ọ bụ mmeri nke oge nke Robert Greene dere. The aha na-ezo aka genre nke fantasy akụkọ ihe mere eme nke ederede na nwere ọdachi, ma karịa ihe niile pastoral ntochi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ 8 maka oge oyi na udu mmiri, oge kacha mma ịgụ
Akwụkwọ kachasị agụ na 2017 na Spain, Mexico, Argentina na Colombia
El Toro Ferdinando laghachiri na ụlọ ihe nkiri: know ma akụkọ a?